Maịka 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 “Ahụhụ ga-adịrị ndị na-akpa nkata ihe ọjọọ, na-emekwa atụmatụ otú ha ga-esi mee ihe na-adịghị mma mgbe ha dina n’elu ihe ndina ha!+ Ha na-eme ya mgbe chi bọrọ,+ n’ihi na ha nwere ike ime ya.+
2 Agụụ inweta ubi agụwo ha, ha anarawokwa ha n’ike;+ agụụ inweta ụlọ agụwo ha, ha ewegharawokwa ha; ha erigbuwo nwoke na ezinụlọ ya,+ rigbuo nwoke ma weghara ihe nketa ya.+
3 “N’ihi ya, nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Lee, m na-eche echiche iwetara ezinụlọ a+ ọdachi+ nke unu na-agaghị agbụrụ isi unu na ya,+ ka unu wee ghara ịdị mpako;+ n’ihi na ọ bụ oge ọdachi.+
4 N’ụbọchị ahụ, a ga-eji unu tụọ ilu,+ kwaakwara unu ákwá arịrị.+ A ga-asị: “E bukọrọwo ihe anyị!+ Ala ndị ala anyị ketara ka o nyere ndị ọzọ.+ Lee ka o si napụ anyị ya! O nyere onye na-ekwesịghị ntụkwasị obi ubi anyị.”
5 Ya mere, ị gaghị enwe onye ga-eji ụdọ na-atụ̀ ala, na-eke ya site n’ife nza,+ n’ime ọgbakọ Jehova.
6 Unu ekwula ihe ọ bụla.+ Ha na-ekwu okwu. Ha agaghị ekwu ihe ọ bụla banyere ihe ndị a. Mmechuihu agaghị apụ apụ.+
7 “‘Gị ụlọ Jekọb,+ à na-ajụ, sị: “Iwe ò weela mmụọ Jehova, ka ọ̀ bụ ya mere ihe ndị a?”+ Ọ̀ bụ na okwu m adịghị arụpụtara onye na-eje ije n’izi ezi+ ihe ọma?+
8 “‘Ụnyaahụ, ndị m biliri nnọọ dị ka ndị iro.+ Unu si n’ihu uwe na-adọrọ ihe ịchọ mma ndị dị ebube n’ahụ́ ndị tụsaara ahụ́ na-agafe, bụ́ ndị dị ka ndị si agha na-alọta.
9 Unu nọ na-achụpụ ndị inyom nke ndị m n’ụlọ nke na-atọ nwaanyị ụtọ nke ukwuu. Unu na-anapụ ụmụ ya ịma mma m+ ruo mgbe a na-akaghị aka.+
10 Bilienụ pụọ,+ n’ihi na ebe a abụghị ebe a na-ezu ike.+ Ebe ọ bụ na ọ ghọwo onye na-adịghị ọcha,+ a ga-ebibi ya; mbibi ahụ na-egbukwa mgbu.+
11 Ọ bụrụ na nwoke nke na-achụso ikuku ma na-agha ụgha ekwuo okwu ụgha,+ sị: “M ga-agwa unu okwu banyere mmanya na ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu,” ọ bụkwa ya ga na-agwa ndị a okwu.+
12 “‘M ga-achịkọta Jekọb, unu dum;+ aghaghị m ịchịkọta ndị Izrel fọdụrụnụ.+ M ga-eme ka ha dịrị n’otu, dị ka ìgwè atụrụ nke nọ n’ogige atụrụ, dị ka ìgwè anụ nke nọ n’ebe ha na-ata ahịhịa;+ a ga-eme mkpọtụ na ha n’ihi ndị mmadụ.’+
13 “Onye na-etipu mgbidi ga-ebutere ha ụzọ:+ ha ga-etipukwa mgbidi. Ha ga-esi n’ọnụ ụzọ ámá gafere, ha ga-esikwa na ya pụọ.+ Eze ha ga-ebutere ha ụzọ, Jehova ga-abụkwa onye ndú ha.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D33%26Chapter%3D2%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl